ကမ္ဘာ့ရေနေ့ WORLD WATER DAY! မတ်လ (၂၂) | Radio Veritas Asia
ကမ္ဘာ့ရေနေ့ WORLD WATER DAY! မတ်လ (၂၂)
"လူသားတိုင်းအတွက်သောက်သုံးနိုင် (သန့်ရှင်း)တဲ့ ရေရရှိရေးဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အခြေခံ လိုအပ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။"
ကျွန်ုပ်တို့ဟာ မြေမှုန့်ကနေလာပြီး ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာဟာ ကမ္ဘာ့ဒြပ်စင်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်ဖို့ ကမ္ဘာ့လေကို ရှူရှိုက်ရင်း လန်းဆန်းမှုကို ရရှိကြတယ်ဆိုတာကို တစ်ခါတလေ မေ့လျော့ နေတတ်ကြပါတယ်။
အခမဲ့ ရရှိနေတဲ့ သဘာဝအရာ အားလုံးအတွက် ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင် ချီးမွမ်းရင်းနဲ့ မိမိမှာ ပိုလျှံနေတာတွေကို တခြားသူတွေကို ဝေမျှလှူဒါန်းကာ နေ့စဥ် သောက်စရာရေ မရကြလို့ ရုန်းကန်နေကြသူများကို သတိရ ဆုတောင်းပေး ကြပါစို့။
Access to safe drinkable water isabasic and universal human right.
–Pope Francis, Laudato Si
ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်က သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေနှင့် ရေဆိုးရေညစ်များသန့်ရှင်းရေး လိုအပ်ကြောင်းမိန့်ကြားခြင်း
ရဟန်းမင်းကြီးသည် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် အန်ဂျေလူးမေတ္တာရွတ်ဆိုဆုတောင်းပြီးနောက် နှစ်စဉ် မတ်လ (၂၂) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပလေ့ရှိသော “ကမ္ဘာ့ရေနေ့” အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် သောက်သုံးရေနှင့် ရေဆိုးရေညစ်များသန့်ရှင်းရေးကို စနစ်တကျဖြစ်စေကြရန် တောင်းဆိုလိုက်သည်။
“World Water Day - ကမ္ဘာ့ရေနေ့” သည် ဘုရားသခင်၏ အံ့ဖွယ်ကောင်းသော၊ အစားထိုးမရသော ဆုကျေးဇူးတော်၏တန်ဖိုးကို စဉ်းစားသုံးသပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်လျက်ရှိကြောင်း၊ ယုံကြည်သူ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ‘ရေ’သည် ကုန်ပစ္စည်းမဟုတ်ဘဲ တစ်လောကလုံး၏အမှတ်သင်္ကေတနှင့်၊အသက်နှင့်ကျန်းမာရေး၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်ကြောင်း မြွက်ကြားခဲ့သည်။
ရဟန်းမင်းကြီးက ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှ လူအများအပြားတို့သည် သောက်သုံးရေအနည်းငယ်သာ ရရှိသောကြောင့် ညစ်ညမ်းမှုများဖြစ်နိုင်သည့်အချက်ကို မီးမောင်းထိုးပြပြီး “လူတိုင်းအတွက် သောက်သုံးရေနှင့် ရေဆိုးရေညစ်များသန့်ရှင်းရေးကို သေချာစေရန်လိုအပ်သည်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ရဟန်းမင်းကြီးက မိမိတို့၏မတူညီကွဲပြားသော စွမ်းရည်များနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများအရ “ဤအလွန်အရေးကြီးသောရည်ရွယ်ချက်အတွက် လုပ်ဆောင်ကြသူများအား” ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှင့် အားပေးစကားပြောကြားခဲ့သည်။ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ၏ Buenos Aires ရှိ ရေနှင့် ရေဆိုးရေညစ်များသန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၏ စံနမူနာကို မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။
“ဒီလုပ်ငန်းကိုရှေ့ဆက်ဖို့အတွက်နဲ့ ရေရဲ့အရေးကြီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အသိပညာမြှင့်တင်ဖို့ အလုပ်လုပ်ကြတဲ့သူတွေအကြောင်း ကျွန်ုပ်စဉ်းစားမိတယ်။ ဒီရေတက္ကသိုလ်မှာအလုပ်လုပ်ကြတဲ့ အာဂျင်တီးနားတွေကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်”
မတ်လ (၂၂) ရက်တွင်ကျရောက်သည့် ကမ္ဘာ့ရေနေ့ကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရေအကျပ်အတည်းနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပညာပေးရေးကို မြှင့်တင်ပေး​ခြင်းသည် (၂၀၃၀) ခုနှစ်တွင် လူသားအားလုံးအတွက် ရေနှင့်ရေဆိုးရေညစ်များသန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးရေး (Sustainable Development Goal - SDG 6) ၏ ရည်မှန်းချက် အောင်မြင်ရေးကို အဓိကအာရုံစိုက် ထောက်ပံ့ရန်ဖြစ်သည်။
(၂၀၂၁) ကမ္ဘာ့ရေနေ့၏အဓိကဆောင်ပုဒ်မှာ ရေကိုတန်ဖိုးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ရေ၏တန်ဖိုးမှာ ၎င်း၏စျေးနှုန်းထက်များစွာပိုသည်။ ရေသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အိမ်ထောင်စုများ၊ အစားအစာ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အလွန်တန်ဖိုးရှိသည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤတန်ဖိုးများကိုလျစ်လျူရှုမိပါက အစားထိုးမရနိုင်သောသယံဇာတကို မှားယွင်းစွာစီမံခန့်ခွဲမှုပင်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ (SDG 6) သည် လူအားလုံးအတွက် ရေနှင့် ရေဆိုးရေညစ်များ သန့်ရှင်းရေးကို သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။ ရေ၏ စစ်မှန်၍ဘက်စုံအသုံးဝင်သည့်တန်ဖိုးကို ပြည့်ပြည့်ဝဝနားလည်မှုမရှိပါက လူတစ်ဦးစီ၏အကျိုးအတွက် ဤအရေးပါသောအရင်း အမြစ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ကာကွယ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
Credit to CBCM
Source: vaticannews.va https://bit.ly/3rm1zZV
'' သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှု ''